छोराको १४ वर्षका साथीसँग आमाले शा रीरिक स म्बन्ध राखेपछि…. – Classic Khabar
August 24, 2021 151
एक महिलाले माया अन्धो हुने कुराको एकपटक फेरी उदाहरण दिएकी छिन् । महिला आफैले टिवीको अन्र्तवार्ताको क्रममा आफ्नो जीवनको बारेमा बताउदै गर्दा एक समय छोराको साथीको २ बच्चालाई जन्म दिएकोे खुलाशा गरेकी हुन् ।
Prevवैदेशिक रोजगारीबाट चैतमा फर्किएका २७ वर्षीय भागेश्वरले जब आफ्नै श्रीमती र बुबाको यस्तो कुरा थाहा पाएपछी ….
Nextप्रेमीकाको १० महिनाको छोरा लागेका २६ वर्षीय दानबहादुर प्रेमीले दिए प्रहरीलाई छक्क पार्ने बयान ?